Macluumaad ku saabsan Charlie Chaplin shactiroolihii ugu weynaa ee aduunkaan soo maray iyadoo xitaa xogaha laga haayo qosolka kaa dhameyn doonaan. – Filimside.net
Macluumaad ku saabsan Charlie Chaplin shactiroolihii ugu weynaa ee aduunkaan soo maray iyadoo xitaa xogaha laga haayo qosolka kaa dhameyn doonaan.
Charlie Chaplin waxaa la aaminsanyahay inuu yahay shactiroolihii ugu weynaa ee aduunkaan soo maray sidoo kalana mid kamid ah dadkii sumcada u yeelay shirkada Hollywood, waxaana loo yaqaanaa magaca The Little Tramp.
=Inkastoo laga joogo ku dhawaad hal qarni filimada uu sameyn jiray hadana wali waxaa aflaamtiisa lagu tiriyaa jowharad aan caadi aheyn kuwa lamid ahna la heli Karin.
=Wuxuu aad u jeclaan jiray inuu guursado gabdhaha da’da yar waxaana sida la sheegay uu dhalay 11 caruur oo wiilal iyo gabdho isugu jiraan.
=Sanadkii 1952dii waxaa laga soo eryay cariga Mareykanka kadib markii la sheegay in afkaarta shuuciyada uu aaminsanyahay sidaas oo ay tahayna dhaxalkiisa dhanka fanka lagama waayo shirkada Hollywoodka.
=Wuxuu aasaasay Studiyaha loo yaqaano United Artists kaasoo ah Studio caan ah waxaana filimaanta lagu duubay kamid ah filimkii weynaa ee James Bond qeybtiisii koowaad sanadkii 1963dii balse haatan Studiyahaas wuxuu qeyb ka yahay shirkada MGM.
=Charlie Chaplin asigaa alifi jiray muusikada filimaantiisa ku jirta waxaana la sheegaa in inta badan uu asiga alifay qaarkoodna uu xitaa ku qaatay abaal marinta Oscar.
=Wuxuu ahaa mid aad u nadaam jecel asigoona aad u jeclaa in waxkasta ay ahaadaan kuwa isku toosan wuxuuna ku dadaali jiray in filimaantiisa khaladka ka ilaaliyo xaqiiqdana u ekaadaan.
=Waxaa la sheegaa in mar filim soconaya kaliya 20 daqiiqo uu ku dhameeyay cajal cabirkiisa yahay 40,000 oo cag waana arin layaab leh maadaama filimka dhan uu ahaa mid 20 daqiiqo ka badneyn.
=Mar uu jilayay filimka City Lights wuxuu ku qasbay atariishada filimkaas oo la dhihi jiray Virginia Cherrill in hal muuqaal lagu soo celceliyo duubistiisa 342 jeer iyadoo ay xusid mudantahay in muuqaalkaas uu ka koobnaa kaliya 2 eray. Tanina waxay cadeyneysaa siduu ua ahaa qof waxkasta iney sidii la rabay ahaadaan jecel.
=Wuxuu ahaa mid aanan dadka kale ku kalsooneyn doorkastana inuu asiga jilo ayuu jeclaa Waxaana la sheegay in uu xitaa gaaray heer inuu damco inuu jilo filim uu asiga kaliya kasoo muuqanaayo qofkalana uusan ku jirin.
=Sanadkii 1972dii waxaa lagu sharfay inuu kasoo qeyb galo xaflada abaal marinta Oscar inkastoo Mareykan laga mamnuucay hadana maamuuskaas loo sameeyay iyo raali galintaba wuu aqbalay asigoona bilad sharaf halkaasi ku gudoomay waxayna xafladaasi kamid aheyd kuwii ugu saameynta badnaa.
=Haweeney cirbixiyeen Ruushka u dhalatay isla markaasna soo iktishaaftay in kabadan 100 Meere ayaa mid kamid ah meerayaashaasi asiga ugu magac dartay waxaana loo bixiyay Chaplin 3623.
=Gurigiisa uu Swezerland ka daganaa markuu dhintay kadib waxaa loo badalay Matxaf ay dalxiisayaasha soo booqdaan waxaana la sheegay in sanadkii koowaad kaliya ay soo booqdeen in kabadan 300,000 oo qof.
=Charlie Chaplin wuxuu geeriyooday sanadkii 1977dii asigoona dhashay sanadkii 1889kii.
=Charlie Chaplin markii uu dhintay xitaa hadal heyn ayuu abuuray kadib markii tuugo ay meydkiisa xadeena isla markaasna ay dalbadeen lacag dhan 600,000 oo Dollar hase yeeshee tuugadaas booliska ayaa gacanta kusoo dhigay iyadoona Chrlie Chaplin dib loo duugay.
Waxaa Aqrisay 566